Sanad kadib dagaalka K Sudan - BBC Somali
Sanad kadib dagaalka K Sudan
15 Disembar 2014
Image caption Dagaalka ayaa barakiciyay kumanaan qof.
Sanad ka hor, dagaal ayaa ka bilawday magaalo madaxda Juba ee Koonfurta Sudan. Wuxuu isla markiiba ku faafay inta badan waqooyiga waddanka.
Dagaalka sokeeye ayaa yimid in ka yar laba sano markii Koonfurta Sudan ay madaxbanaanideeda qaadatay, kadib dagaalo ay kula jiraan dowladda Sudan sanooyin badan.
Dagaalka cusub ayaa saamayn wayn ku yeeshay waddanka.
Dagaalka sokeeye ee Koonfurta Sudan ayaa waxaa sababay tartan siyaasadeed oo u dhaxeeya madaxweyne Sava Kiir iyo ku xigeenkiisii, Riek Machar. Dagaalka socday hal sano, tobanaan kun oo reer Koonfur Sudan ayaa ku dhintay.
Halka sano oo uu dagaalka socday, wuxuu sii kordhiyay xiisada u dhaxaysa labada qabiil ee ugu wayn ee Dinka uu ka dhashay madaxweyne Kiir iyo Nuer oo uu ka dhashay Riek Machar. Labada ciidan ee dagaalamaya ayaa lagu eedeynayaa xasuuq, oo mararka qaar la beegsano dadka rayadka.
Ururka goboleedka IGAD ayaa qabtay shirar dib u heshiisiin, waxayna labada dhinac ku dhiiri galinayaan inay isku tanaasulaan si Ra'iisalwasaare uu uga noqdo Mr Machar dowlad ku meel gaar ah.
Lama hubo awooda uu yeelanayo mucaarad Ra'iisalwasaare ah.
Dad badan waxay hadda aaminsan yihiin in loo baahan yahay in labada hogaamiye ay ka tagaan siyaasada safka hore.